Enyochala Qualcomm's Snapdragon 665 site na Geekbench | Gam akporosis
Ka oge na-aga, anyị na-ahụ ndị nrụpụta ọhụụ, ụfọdụ ka ndị ọzọ mma, nke a bụ usoro a na-apụghị ịgbagha agbagha na ihe ezi uche dị na ya, n'ihi na ihe niile na-aga n'ihu. Firms dị ka Qualcomm na-azụlite nhọrọ na ahịa, ne mfonini bi a wɔakyere agu kasɛt so. Mana ọ bụghị naanị ụlọ ọrụ a na-eme ya, kamakwa Mediatek na Unisoc, nke nwere obere ọnụnọ na ekwentị.
Edeela Qualcomm dịka nke kachasị mkpa na ụlọ ọrụ ahụ, ọ bụ ya na-enye ọtụtụ ekwentị nwere chipsets. N'aka nke ozo - itinye Unisoc n'akụkụ - Mediatek adighi eme ya dika nke mbu; Na mgbakwunye, ọ na-elekwasị anya na ngwaọrụ ndị dị ala na nke etiti, yana ọnụ ọnụ ndị China, na-ahapụ ala maka Qualcomm na SoCs nke usoro 800. Snapdragon 855 -oso na ihe ohuru SD855 Gụnyere- Ọ bụ ihe atụ dị ndụ na njedebe ikpeazụ nke arụmọrụ kachasị elu, mana nke a na-achọ ịkwụsị ndụ ya dịka onye kachasị ike, ebe ọ bụ na el Snapdragon 865 dịworị ụzọ ya ma Geekbench nwalela ya.
Na processor enwetawo a akara nke 4,165 na otu-isi ule na 12.946 isi na multi-isi ule, tụnyere ihe Xiaomi Black Shark 2 Pro, ngwaọrụ Ịgba Cha Cha ya na Snapdragon 855 gbakwunyere nke nwetara 3,462 na ngalaba otu isi na 10.765 na ọtụtụ.
Snapdragon 865 na Geekbench
Ntọala ugboro nke SoC kwuru na ikpo okwu nyocha bụ 1.8 GHz. Ikekwe oge kachasị elu nke chipset ruru ga-eru 3 GHz ma ọ bụ karịa karịa ọnụ ọgụgụ a., ya mere, anyị ga-eche ihu na Sistem-on-Chip nwere ike nke ihe niile enwerela na inwe; agaghị enwe egwuregwu ma ọ bụ ngwa nke na-enweghị ike ịgba ọsọ. Na mgbakwunye, ị ga-etinye n'ọrụ, ee ma ọ bụ ee, ọtụtụ isi ihe ga - enyere aka na ọrụ ndị ọzọ akọwapụtara, dịka AI. N’oge na-adịghị anya, anyị ga-amata nkọwa ya niile; ikekwe site na njedebe nke afọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Geekbench enyochala Qualcomm's Snapdragon 665
IFA 2019: Ihe anyi kwesiri imata